amazing-world – MediaNP
के तपाईलाई थाहा छ ? यी महिनामा जन्मेका मानिसहरु अति नै भाग्मानी हुन्छन नी, कही तपाईको जन्म महिना पो पर्यो कि ?(जान्नुहोस्)
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००९:३२0
काठमाडौ । हरेक मानिसहरुको जन्म फरक फरक महिना ,बार र गतेमा भएको हुन्छ । यही अनुसार पनि मानिसहरुको भविष्यको सूत्रहरु पत्तो लाग्ने ज्योतिष शास्त्रीहरुले बताएका छन् । त्यसैले आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ
युरोप छिर्न यी दुई व्यक्तिहरुले लगाए यस्तो जुक्ति , तव भयो उनीहरुको यस्तोप हालत
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:३७0
भखरै युरोप छिर्नका लागी दुई अफ्रिकी व्यक्तिले अनौठो किसिमको जुक्ति लगाएको भिडियो सार्वजानिक भएको छ । ती युवकहरुले यरोप छिर्नको लागी गद्दा भित्र लुकेर यात्रा गरिरहेका थिए । गद्दालाई भ्यानको छतमा हालिएको थियो भने उनीहरु
यी हुन् संसारकै उस्तै जुम्ल्याहा दिदिबहिनी, दुवैको एउटै प्रेमी ,एउटै अनुहार (तस्विरसहित)
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:२८0
काठमाडौ । अस्ट्रेलियामा एउटै शारिरिक संरचना र अनुहार भएको छुट्याउनै नसक्ने एक जुम्ल्याला दिदीबहिनी यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् । जसको नाम Anna र Lucy Decinque हो । विश्वमा यस्ता किसिमका मान्छेहरु त टन्नै
यी १० संकेतहरु मानिसमा देखिएमा सम्झनुस् धन लाभ हुन्छ
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००९:३४0
काठमाडौ । ज्योतिशी शास्त्रीका अनुसार मानिसहरुका आउने विभिन्न संकेतहरुले पनि राम्रो र नराम्रो हुने बताउछन् । अर्कोतर्फ मानिसहरुको जीवनमा सपनीमा या विपनीमा हुने विभिन्न घटनाक्रम पनि एक भविष्यको संकेत नै हो । तर आज हामी
हेर्नुहोस्, कुन बार जन्मेका ब्यक्तिले के काम गर्दा राम्रो हुन्छ ?
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००३:०२0
हरेक मानिसको जन्म बारले व्यक्तिको भविष्यवाणि गर्ने गर्छ । जन्मबारले ब्यक्तिको जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । बार अनुसार फरक फरक ग्रह हुने भएकाले ग्रहले ब्यक्तिको जीवनमा प्रभाव पार्ने कारक नै ग्रह बनेको हुन्छ ।
मानिस जन्मजातै खराब हुन्छन् त ? हेनुहोस् यस्ता छन् कारण !
समाजमा केहि मानिसहरु निकै असल खालका छन् त कोहि मानिसहरु बदमासको साथमा खराब रहेका छन् । समाजका असल व्यक्तिको बारेमा तारिफ हुन्छ र खराब व्यक्तिको जहिल्यै पनि कुरा काटिन्छ । मानिस असल र खराब कसरी
मोबाइलमा चौबीसै घण्टा झुण्डिने र सेल्फी खिच्नेलाई ब्रिटिश आर्मी भर्तीको अवसर !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००२:२७0
बेलायती सेनाले ब्रिटिश आर्मीमा भर्ना हुनको लागी अनौठोको विज्ञापन खोलेको छ, उक्त भर्नाको विज्ञापनले धेरै मानिसहरुलाई चकित बनाएको छ । विज्ञापनमा उल्लेख भएअनुसार सेनामा सेल्फी खिच्ने, धेरै बेर भिडियो गेम खेलिरहने, मोबाइल बारम्बार चलाइरहने युवा
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१४:०३0
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रले भविष्यमा हुने घटनामा वर्तमान क्रियाकलाप र घटनाले समेत प्रभाव पार्ने बताउँछ । कतिपय भविष्यमा हुने घटनाका लक्षणहरु अगाडी नै देखिने समेत ज्योतिष शास्त्रको दावी छ । भविष्यमा ठूला घटना हुँदा देखिने
यी हुन् संसार लोभ्याउने शरीर भएकी हट मोडल, उनको तस्विरले सबैलाई बनायो चकित !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:०८0
पछिल्लो समय समाजिक संजालमा धेरै मानिसहरु जोडिएका छन् । धेरैले आफ्नो सुन्दरताको कारणले सामाजिक संजालमा चर्चा पनि बटुल्न सफल भएका छन् । आजभोलि सामाजिक संजालमा सुन्दरी युवतीको तस्विरहरु निकै भाइरल भएको छ । सुन्दरी युवतीका
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००८:१०0
एजेन्सी,२२ पुस । अमेरिकाका एक फुटबल कोछले आफ्नो घरमा राखेको विद्यार्थीसँग श्रीमतीले अवैध सम्बन्ध राखेपछि यतिबेला यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ । आफ्नो श्रीमतीबाट यति ठूलो घात होला भनेर नसोचेका कोचकी श्रीमतीले घरमा बस्न आएका